थाहा खबर: शान्ति सेनामा मृत्यु भएका सैनिक परिवारले पाएनन् राष्ट्र संघबाट क्षतिपूर्ति
शान्ति सेनामा मृत्यु भएका सैनिक परिवारले पाएनन् राष्ट्र संघबाट क्षतिपूर्ति
उदयपुर : नेपाली सेनामा कार्यरत धेरै सैनिकहरुको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा जाने नै हुन्छ। नेपाली सेनामा भर्ना हुने अधिकांश नेपाली युवाले शान्ति सेना जानुलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएका हुन्छन्।
शान्ति सेनामा नेपालबाट वर्षेनी सयौं सैनिकहरु जाने गर्छन्। तिनैमध्येका एक थिए त्रियुगा नगरपालिका - १० बोक्सेका भरतराज कार्की। तर उनको लेबनानमा नै मृत्यु भयो। पति बितेपछि देविकाले नेपाली सेनाबाट ९ लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप पाइन्। तर, शान्ति सेनाको मृत्यु हुँदा संयुक्त राष्ट्र संघबाट पाउने सुविधा भने उनले पाउन सकिनन्।
‘खै उहाँका माथिका सरहरुले पाउने जति दिलाइदिएको भन्नुभएको छ’ थाहाखबरसँग देविकाले भनिन्, ‘अहिले डेरामा बस्दै आएको छु, कहाँ गएर कसलाई माग्न जानु, नेपाली सेनाको जागिरे हुँदा पाउने सहयोग पाएको छु।’घर त्रियुगा नगरपालिका १० मा भए पनि देविका कार्की अहिले दुई सन्तानका साथ शिवालय टोलमा कोठामा भाडामा बस्छिन्।
‘बाबा बित्नुभएको खबर आउँदा बाबाका साथीहरुले विभिन्न सहयोग पाउँछौं नानी भन्नुभएको थियो’ १४ वर्षे छोरी सिसम कार्कीले भनिन्, ‘खै बाबा विदेशमा मर्नुभयो, आमाले विदेशमा मर्दा पनि केही सहयोग नपाएको भन्नुहुन्छ।’
भरतराज कार्कीले २०६० बाट सेनामा जागिर सुरु गरेका थिए। उनी ०७२ असोजमा श्री जंग गणबाट सैनिक सेवा पदक प्रमुख अमृतबहादुर बोहोरा प्रमुख सेनानीको नेतृत्वमा गोरखदल गणमार्फत शान्ति सेनाको ५७ औं डफ्फासहित लेवनान गएका थिए। २०७२ असोजमा शान्ति सेनाका लागि लेबनान पुगेका कार्कीको ०७२ पुस १७ गते ड्युटी सकेर फर्कंदा मृत्यु भएको पत्र प्राप्त भएको पत्नी देविकाको भनाइ छ। ‘उहाँको शव हेर्न बोलाए,’ देविकाले भनिन्, ‘मुटु, कलेजो सबै फुटेको छ भने हेर्न सकिन, अनि गइनँ।’
देविकाका अनुसार भरतराज अहेब थिए। ‘सबैले दीर्घरोगको कारण मृत्यु भएकाले राहत नपाएको भनेका छन्। तर, उहाँले कहिले पनि औषधी सेवन गरेको मलाई थाहा छैन। शान्ति सेनामा लेवनान जानुअघि पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुभएको थियो तर, केही रोग देखिएको थिएन’ उनले भनिन् ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा रोग देखिएको भए नलगिदिएको भए हुन्थ्यो।’
पतिले नेपाली सेनामा सेवा गरेबापत पाउने सबै सेवा सुविधा पाएको बताइन्। देविकाले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘श्रीमानले लेबनानमा गएर ड्युटी गरेको पनि पैसा पाएँ, तर, दुखको कुरा धेरै आर्मीका श्रीमतीहरुले ड्युटीकै समयमा मरेकाले किन युएनबाट नपाएको भनेर सोध्छन्। म कसलाई गएर सोध्नु?'
के भन्छ नेपाली सेना?
नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले शान्ति सेना जाँदा मृत्यु हुने सबैले नियमानुसार रकम पाउने बताए। 'कालगतिले मृत्यु हुँदा वीरगति प्राप्त गरेको जसरी पाउने सुविधाहरु नपाउने होला' उनले भने, ‘तर धेर थोर सेवा सुविधा त पाउनुनै पर्ने हो।’
लेवनान जाने ५७ औं डफ्फा युएन मिसनका प्रमुख सेनानी अमृतबहादुर बोहरा हुन्। बोहराले कार्कीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्दो सहयोग गरेको बताए। उनी भन्छन् 'म त्यो युनिटको प्रमुख थिएँ। मैले कार्कीको परिवारलाई भेटेरै भनिदिएको छु। उहाँ भेट्न पनि आउनुभएको हो। त्यसमा पनि क्राइटेरिया छन्। शान्ति सेना जानुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य चेक जाँच हुन्छ। अपर्झट भयो भने सहयोग गर्ने हो।'
प्रमुख सेनानी बोहराले कार्की दीर्घरोगी देखिएका कारण संयुक्त राष्ट्र संघले दिने क्षतिपूर्ति नपाएको बताए। 'दीर्घरोगीलाई युएनको आफ्नै इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। पोष्टमार्टम रिर्पोट न्युयोर्क पठाउँछ' उनले भने, 'न्युयोर्कबाट उहाँ पहिला नै रोगी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आयो। उहाँलाई युएनबाट केही पनि दिन नसकिने भनेर जानकारी आएको हो।'
दीर्घरोगी भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कसरी शान्तिसेनामा लगिए त भन्ने प्रश्नमा युनिट प्रमुख बोहराले कहिलेकाहीँ व्यवहारिकता हेरेर पनि त्यस्ता व्यक्ति शान्ति सेनामा पठाइन सक्ने बताए। 'सानोतिनो कुरामा त्यति धेरै रोकिन्न। विदेशमा गएपछि उतैको रुल्स, रेगुलेसन हुन्छ। त्यही भएकाले उहाँले पाउन नसक्नु भएको हो' उनले भने।